JOGOLA HARARIIFI GANDA OROMOO: Oromia Shall be Free |
JOGOLA HARARIIFI GANDA OROMOO:
bilisummaa January 13, 2017	Comments Off on JOGOLA HARARIIFI GANDA OROMOO:
Magaala Harar keessa dur naannoo bara 1875 – 1885! Saba lakkooysaan xiqqaa tahe warra “Geey” Ykn Adaree ja’aamu jogola keessa qofa jiraachaa ture. Jogola gama alaatiin sabni Oromoo akka jiraachaa turee fi akkuma suuraa irratti argitan kana manneen Oromoo naannoo jogolaa marsee akka jiraatu ragaa hedduu jira.
Arraa garuu Adareen lafa Oromoo mara dhunfattee Naannoo Hararii jedhamuun akka Naannootti moggaafamtee dangaa isaanii lafa Oromoo irratti babal’ifachaa jiran. Naannoon Hararii wayta ammaa bahaan Erar dabartee gara Baabbilee dhihaattee jirti. Lixaan Hammarreessa dabartee Aawwaday gahaa jirti. Kaabaan immoo Dirree Xayyaaraa dabartee Biiftuu gahaa jirti. Akkasumaas gara Kibbaatiin Haakim qaxxaamurtee Fadisitti dhihaachaa jirti.
(Photo: FB Oromo Graphya)
Previous Did Al-Sisi, Kiir and Museveni Form Alliance against Ethiopia and Sudan?
Next Diinni Oromoo Enyuu?